VLC Player နဲ့ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့အခါ စာတမ်းထိုးမပါခဲ့ရင်ဒေါင်းလုပ်ချနည်း – DigitalTimes
VLC Player နဲ့ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့အခါ စာတမ်းထိုးမပါခဲ့ရင်ဒေါင်းလုပ်ချနည်း
Audio & Video HOW TO PC & Laptops
PC ရဲ့ဗီဒီယို player တွေထဲမှာ ဘုရင်လို့တင်စားရလောက်သူကတော့ VLC Media Player ပါပဲ။ VLC က သူ့ရဲ့ Interface ကိုလုံးဝကြီးမပြောင်းလဲပေမယ့်လို့ လိုအပ်ချက်သေးသေးလေးချင်းကို မြှင့်မြှင့်သွားတဲ့အတွက် သုံးတဲ့သူတော်တော်များများသဘောတွေ့ကြတာဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်။ ဥပမာဆိုရင် စာတမ်းထိုးမပါတဲ့ဇာတ်ကားတွေဆို စာတမ်းထိုးဒေါင်းလုပ်ချလို့ရနိုင်တာမျိုးပေါ့။
ဒီတော့ စာတမ်းထိုးမပါတဲ့ဇာတ်ကားတွေကြည့်တဲ့အခါ စာတမ်းထိုးကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ချမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး VLC မှာ စာတမ်းထိုးဒေါင်းမယ်ဆိုရင် အရင်ကတော့ VLSub ဆိုတဲ့ extension ကိုဒေါင်းပြီးမှရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ သုံးရအဆင်ပြေအောင် VLC player ထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်သွင်းပေးပြီးသားပါ။
၁. ပထမဆုံး VLC ကိုဖွင့်ပြီး ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ “View” ဆိုတဲ့ menu အောက်မှာ “VLSub” ဆိုတာလေး တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ (တစ်ချို့ဗားရှင်းတွေမှာတော့ “Download Subtitles” လို့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်)
၂. VLSub window မှာတော့ ကိုယ်ရွေးချင်တဲ့ စာတမ်းထိုးဘာသာစကားကိုရွေးပြီး ဇာတ်ကားနာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ “Search by name” ကိုနှိပ်လိုက်ရင် OpenSubtitles.org နေ ဆိုင်ရာစာတမ်းထိုးဖိုင်တွေကျလာပါလိမ့်မယ်။
“Search by hash” ကိုသုံးပြီးရှာချင်လည်းရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဗီဒီယိုရဲ့ hash ကိုတွက်ပြီး သူနဲ့ကိုက်တဲ့ စာတမ်းထိုးဖိုင်ကိုထုတ်ပေးပါလိ့မ်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့များ ဗီဒီယိုကို format တစ်ခုခုပြောင်းလိုက်ရင်တောင့် သူ့ရဲ့ hash method အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။
၃. ကိုက်တဲ့စာတမ်းထိုးဖိုင်ထွက်လာပြီဆိုရင် ရွေးပြီး “Download Selection” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အပြာရောင်လေးနဲ့ “Download link” ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ “Save As” ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာပါမယ်။
“Save As” box မှာတော့ စာတမ်းထိုးဖိုင်ကိုဘယ်နားမှာသွားသိမ်းချင်လဲ(ဘယ် folder ထဲကိုဒေါင်းလုပ်ချချင်လဲရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်) မရွေးဘူးဆိုရင်တော့ default အနေနဲ့ လက်ရှိဗီဒီယိုရှိတဲ့ folder ထဲမှာပဲသိမ်းပေးသွားမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ VLC ထဲမှာ စာတမ်းထိုးဖိုင်ကိုဖွင့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ စာတမ်းထိုးပေါ်ဖို့ ဗီဒီယိုရဲ့ menu bar ကနေ “Subtitle” ကိုနှိပ် “Add Subtitle File” ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ (.srt) ဆိုတဲ့ စာတမ်းထိုးဖိုင်ကိုရွေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စာတမ်းထိုးပေါ်ပါပြီ။ ဒါကတော့ VLC ဗားရှင်းအသစ်တွေအတွက်ပါ။
(New version of VLC)
ဗားရှင်းအဟောင်းတွေမှာတော့ အပေါ် menu bar က “Video” ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး “Subtitles Track” ကနေ “Open File” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ကနေ ကျလာတဲ့ထဲက .srt file လေးကိုရွေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ ဒါဆိုရင် အားလုံးစုံပြီထင်ပါတယ်။
အဆုံးသတ်ရရင် VLSub ကတော့ အင်တာနက်မှာ စာတမ်းထိုးဖိုင်မှန်မမှန်ရှာနေဖို့အတွက် အချိန်ပေးစရာမလိုတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ extension လေးတစ်ခုပါ။ စမ်းကြည့်ပြီးအသုံးဝင်မဝင်ပြောခဲ့ပါဦး…
Ref: Wiki How, MakeTechEasier
Tags: Subtitle download, VLC Media Player
Face ID ၊ ဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပေါက်ကြားလာပြန်တဲ့ iPhone SE 2